PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - CAREERS CORNER: Qaphela isithunzi sakho emsebenzini
CAREERS CORNER: Qaphela isithunzi sakho emsebenzini
Ilanga - 2017-09-07 - Relationships & Love Issues - LUCKY CAIN lucky.cain@ilanganews.co.za
SINGABANTU sinezindlela esicabanga nesenza ngazo izinto, sibuka impilo ngendlela eyehlukile. Lokhu kungadalwa yizinto ezahlukile okubalwa indlela umuntu akhuliswe ngayo noma izingqinamba ahlangabezane nazo ekukhuleni kwakhe.
Noma ngabe yikuphi kodwa kumele uqaphele uma ungumuntu osebenzayo ngoba kwesinye isikhathi kuyaphoqa ukuba ubeke eceleni imizwa yakho. Kubalulekile ukuba kwesinye isikhathi ukubeke eceleni okuthinta wena kodwa ubheke isithunzi senkampani oyisebenzelayo.
Kunezinto ongahambisani nazo ngokwakho kodwa ngenxa yenkampani oyisebenzelayo uzibekezelele futhi uzihloniphe noma uzigcine ngaphakathi kuwena. Abaningi bazosikhumbula isigameko esithinta umsakazi weMetro FM, uCriselda Dudumashe. Usebenzise imizwa yakhe nobudlelwane anabo noMnu Mduduzi Manana ngesikhathi ebhala ekhasini lakhe lokuxhumana.
Akubhalile ngalo mholi akwehlanga kahle kwabaningi kangangokuba uthole okukhulu ukugxekwa kwaze kwaholela ekutheni ezinye izinhlangano ziziqhelelanise naye. Lokhu kumdalele amazinyo abushelelezi nakumqashi wakhe, iSABC.
Kwesinye isikhathi emsebenzini uyaphoqeleka ukuba usebenze nomuntu eningezwani naye kahle kodwa ngenxa yokuthi uyasebenza kumele uqinisekise ukuthi usebenza naye kahle futhi kawenzi ukusebenza kwakhe kube nzima.
Uma kuphoqa ukuba nimoyizele emsebenzini kumele ukwenze lokhu ngaphandle kokunanaza, indlela ozizwa ngayo uyibeke eceleni. Kulabo abasebenza nezithandwa zabo nabo kuyaphoqa ukuthi uma sebesemsebenzini baziphathise okwezisebenzi hhayi njengezithandani.
Emsebenzini kumele kucace ukuthi niyizisebenzi, ngakho kumele niphathane kanjalo, ukuthandana kwenu nizokubona ngemuva kwesikhathi somsebenzi. Ukuze nihlale nisebenza ngokuthula emsebenzini, kumele nigweme izinkulumo ezithinta ezepolitiki, ezenkolo, amasiko nokunye okuhlobene nakho.
Imvamisa lezi zinhloko ziyinkinga ezindaweni zokusebenza njengoba izisebenzi zinemibono eye- hlukile ngazo kanti abanye bangaze bakhiphe nesidumbu ukuvikela abakholelwa kukhona.
Qaphela imizwa yakho ingakulawuli endaweni yokusebenza ngoba ungagcina usulahlekelwa umsebenzi. Masihloniphane sisebenze ngokubambisana ngoba kunzima ukulahlekelwa wumsebenzi kulesi sikhathi lapho izinga lokuntuleka kwemisebenzi liqhubeka nokwanda.
KUMELE uyibeke eceleni indlela ozizwa ngayo emsebenzini kodwa wenze okungavikela isithunzi sakho nenkampani oyisebenzelayo.